Maindasitiri epamusoro anoshandisa Big Data - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Yakakura dhata idhoriyamu data ingave isina kuumbwa kana mune yakarongeka fomu, uye nekuda kwehukuru hwayo vhoriyamu seizvi zvakaoma kuita.
Iko kushandiswa kwemahombekombe makuru ekutyaira maindasitiri?
Masangano anogona kunge aine zvibodzwa zvakati wandei zvekushandisa makuru mapurojekiti. Asi chinangwa chekutanga chemasangano mazhinji ndechekuvandudza ruzivo rwevatengi uye kuzadzisa kudzikisira mutengo kana kuita kuti mashandiro aripo anyatsoita zvinangwa zvechipiri.
Asi kune iyo sangano, zvakanyanyisa kukosha kuti unzwisise kuti ndezvipi zvinomira pazvinoenda pakutorwa kwedata hombe?
Kune iyi mhinduro sangano rinofanira kuongorora zvinotevera:
Kunyangwe iyo hombe data ichipa iyo yechokwadi kukosha kana kwete?
Sangano rinofanirwa kuongorora saizi yemukana wemusika
Ndeapi mhando yezvigadzirwa zvitsva uye masevhisi anogona kugadzirwa ayo anogona kushandisa hombe data?
Mamwe masangano anogona kunge ave kutoshandisa data hombe uye anogona kungoda kuisazve zvigadzirwa zvawo zviripo nemasevhisi kuti ashandise dhata hombe.
Heano maitiro emamwe maindasitiri epamusoro anoshandisa Big Data uye nemabatiro avari kuita ivo kunze
Banking & Kuchengetedzwa
Matambudziko makuru edhata kumabhizimusi ebhengi
Izvi zvinogona kuongororwa pamusoro pechidzidzo chakaitwa pamusoro pezvekudyara uye mabhizimusi ekutengesa emabhangi ayo anobatsira pakuratidzira matambudziko makuru e data anotarisana neiyi indasitiri. Zvinetso zvinogona kunge zviri zvekuremekedza, semuenzaniso, kupa yambiro yekutanga kubiridzira kwekuchengetedzwa, kuona kubiridzira kwemakadhi, zvine chekuita nekambani kuburitsa njodzi, kuongororwa kweIIT mashandiro, kana kungave kune hukama nekushandurwa kwedata kwevatengi.
Kushanda kwedata hombe mumabhangi uye indasitiri yekuchengetedza
Iyo Securities Exchange Commission inoshandisa iyo hombe data yekutarisa zviitiko zvemusika zvemari. Kuti ubatise zvisiri pamutemo zvekutengeserana zviitiko mumisika yemari zvinoshandisa network network analytics uye echisikigo mitauro processor.
Dhata hombe rinogona zvakare kushandiswa nevatengesi vekutengesa, makuru mabhanga mumisika yemari. Ava vatengesi vekutengesa vanoshandisa hombe dhata nechinangwa chekugadzira yakakwira-frequency kutengeserana, kana yekutora sarudzo inoenderana nerutsigiro analytics, kuyera manzwiro mumisika yemari.
Iyi indasitiri zvakare inoenderana nedata hombe rezvinhu zvine chekuita nekubiridzira mari, uye kumwe kudzikisira kwekubiridzira.
Vakuru vanopa dhata avo vakanangana neiyi indasitiri semuenzaniso kuyerera base masisitimu, 1010 dhata etc.
Zvekutaurirana midhiya & varaidzo
Indasitiri-yakanangana nematambudziko makuru edhata
Nhasi vatengi vanotarisira zvakapfuma zvemidhiya mune akasiyana mafomati pamwe nemhando dzakasiyana dzemidziyo, saka izvi zvinopa dambudziko kune vezvenhau nevekuvaraidza indasitiri.
Pamwe nedambudziko iri, kune mamwe mimwe matambudziko ayo kutaurirana media uye varaidzo indasitiri ingatarisana nezviri sezvataurwa pazasi:
Zvinetso zvinogona kuenderana nekutora,
kuongorora nzwisiso yevatengi uye nekuishandisa zvakare.
Inotungamira nharembozha uye zvemagariro midhiya zvemukati
Zvinetso zvine chekuita nekunzwisisa kwemidhiya yezvinyorwa
Kushanda kwemahombe data mu media varaidzo uye indasitiri yekutaurirana
Iwo masangano akananga kune ino indasitiri anoongorora data revatengi pamwe nehunhu hwehunhu panguva imwe chete kuitira kuti vagadzire profiles dzevatengi dzinogona kushandiswa ku:
Kugadzirwa kwemukati kunoreva kune akasiyana tarisiro vateereri
Zvekurudziro yezvinyorwa pane zvinodiwa
Kuyera kwemukati mekuita.
Izvi zvinogona kutsanangurwa nerubatsiro rwemuenzaniso weamazon prime iyo inotarisira kupa ruzivo rwakakura rwevatengi, mupfungwa yekuti inopa vhidhiyo, mimhanzi uye Mabhuku emhando mune imwe shopu yekumira uye inoonekwa semutengi wepamusoro webhidhi data indasitiri yevaraidzo.
Ichokwadi kuti chikamu chezvehutano chine mukana wehuwandu hwedata asi chinogona kukundikana pakushandisa huwandu hukuru hwedata hunogona kunge hwakakonzerwa nekushandiswa kwehurongwa husina basa.
Chikonzero chekutadza mukushandisa iyo data chinogona kunge chiri chekuti chokwadi chemagetsi hachiwanikwe, kana pamwe hachina kukwana kana kusagoneka. Kunze kweizvi, vanopa hutano vane ruzivo rwakanangana nehutano izvo zvinonetsa kubatana ne data inoratidza mapatani anobatsira mune yekurapa.
Kushanda kwedata hombe muchikamu chehutano
Icho chinhu chekushandisa chinogona kutsanangurwa nemuenzaniso zvichinongedzera kune zvimwe zvezvipatara zvinoshandisa data rakaunganidzwa kubva kune nharembozha app, kubva kune vanoverengeka vevarwere kugonesa vanachiremba kushandisa mishonga inoenderana neuchapupu pane kupa akasiyana marabhoritari bvunzo kune vese varwere vanoenda kuzvipatara.
Iri dambudziko hombe rakatarisana neindasitiri yedzidzo sezvo indasitiri yedzidzo ichifanira kuisa data hombe kubva kunzvimbo dzakasiyana uye vatengesi vakasiyana uye saka inogona kusangana nedambudziko rekushandisa dhata hombe pamapuratifomu ayo asina kugadzirirwa data rakasiyana rakatorwa kubva kwakasiyana masosi .
Kushanda kwemahombe data mune dzidzo
Inogona kushandiswa kuyera kugona kwemudzidzisi pakuona chiitiko chiri nani pakati pemudzidzi nemudzidzisi. Izvi zvinogona kushandiswa kugadzirisa uye kuyera mashandiro emudzidzisi zvine chekuita nenhamba dzevadzidzi, huwandu hwevadzidzi, uye zvishuwo zvavo.
Kugadzira & zviwanikwa
Kuwedzera kwekuda kwezvisikwa semuenzaniso mafuta, zvekurima zvigadzirwa, zvicherwa gasi, simbi s nezvimwe ndizvo chikonzero chekuwedzera huwandu uye velocity yedata uye zvinonetsa kubata kune ino indasitiri.
Sezvo kugadzira maindasitiri haakwanise kutora iro rakakura data uye kurishandisa zvakazara, saka, iyo indasitiri yekugadzira inogona kusakwanisa kupa yakagadziriswa mhando yechigadzirwa, uye inogona kutadza kuwana zvirinani purofiti margins.
Kushandiswa kwedata hombe mukugadzira uye maitiro echisikigo
Dhata hombe rinobatsira mukufungidzira kwekufananidzira, mune mamwe mazwi, zvinobatsira kushandisa huwandu hwedata rakagadzirwa kubva kune geospatial dhata, graphical data nezvimwe kunzvimbo dzinodudzirwa kudengenyeka kwenyika kana kudzorerwa kwedziva.
Iyo inishuwarenzi indasitiri inofanirwa kutarisana nezvinetso zvemashoko makuru kana ikasaririra kumashure mumasevhisi ayo ega kana mitengo yayo yakasarudzika uye nekuda kwekushomeka kwemasevhisi akanangidzirwa anoitirwa zvikamu zvitsva.
Kushandiswa kwemahombe data muinishuwarenzi indasitiri
Pano zvinobatsira kuongorora nekufungidzira maitiro evatengi nedata rakaunganidzwa kubva kunhau dzezvemagariro, kana GPS zvishandiso. Izvo zvinobatsirawo indasitiri kuitira zvirinani kuchengetwa kwevatengi.
Dhata hombe rinogona kushandiswa kutora manejimendi. Izvo zvinobatsira kupa ruzivo rwekutarisa zvirevo mukati mekutenderera kwese kushandisa data rakakura rinogadzirwa kuburikidza nemadhijitari chiteshi uye zvemagariro midhiya.
Kubva kuvashambadzi vezvitoro kune vekutengesa zvizere kune e-commerce vatengesi iyi indasitiri ine data hombe rakaunganidzwa pamusoro penguva. Iyi data inogona kunge yakawanikwa kubva kuPOS haina kunyatsoshandiswa kugadzirisa ruzivo rwevatengi kusvika padanho rinodiwa.
Kushandiswa kwedata hombe muindasitiri yekutengesa uye yekutengesa
Iko kushandiswa kwedata hombe mune ino indasitiri kunogona kuongororwa nemuenzaniso wemakambani akaita seMicrosoft kana IBM iyo inoshandisa iyo hombe data yakaunganidzwa, nekuda kwezvinangwa zvinotevera:
Zvekugadziriswa kwevashandi vavo kuburikidza nedatha inounganidzwa kubva kumatengi emapateni, chero zviitiko zvemuno nezvimwe.
Zvekuita kuongororwa nenguva yekuverenga kwavo
Kusvikira zuva, data hombe rave rakaunganidzwa kubva kunharaunda yakadzika masocial network uye kubva kumaterevhizheni ane yakakwira-mhanyisa data. Asi zvinosuruvarisa, iyo data haina kunge yashandiswa nemazvo kutsvagisa basa kuti unzwisise mafambiro maitiro.
Kushanda kwedata hombe muindasitiri yekufambisa
Yakakura data inogona kushandiswa ne:
Nehurumende kuronga nzira, nzira dzekudzora traffic, yekushandisa nzira dzakangwara dzekutakura.
Nebazi rakazvimirira rekutarisira mari mukutakura, kugadzirisa zvigadziriso uye nekugadzirisa kufamba kwendege.
Nevanhu vekuronga nzira kuti vachengetedze nguva yavo nemari.
Unoda kunzwisisa mashandisiro aungaita Big Data uye guru Data Analytics kunatsiridza bhizinesi rako? Taura nekutaurirana